Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada oo shirar iyo siminaaro ka wada Canada
Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada oo shirar iyo siminaaro ka wada Canada
Posted by ONA Admin	/ July 24, 2012
Hogaanka Arimaha Bulshada HAAB ayaa shirar uu la qaatay bulshada Somaliyeed ku soo gababeeyay tababar uu u furay xubnaha hawlawdeenka JWXO ee degan magaalada Edmonton Alberta Canada . Tababar kan ayaa wuxuu ahaa mid kor u qaadaya fahanka siyaasadeed iyo aqooneed ee xubnuhu ay ku hawl geli lahaayeen.
Xubnaha tababarkan ka soo qaybgalay ayaa isugu jiray rag iyo dumar. Xubnuhu waxay si buuxda u qaateen siminarkan iyaga oo ku qanacsan inuu yahay mid ay u baahnaayeen wax soo saarkoodana kor u qaadidoono, una horkacaya shaqo wanaag iyo hogaamin toolmoon. Tababarkan oo guud ahaan laba maalmood socday, meelo kale oo aduunka ka mid ahna hore loogu soo qabtay, oy ka mid ahaayeen xubnaha JWXO ee Maraykanka ayaa maanta 22/7/12 soo gabagaboobay. Tababarkan ayaa wuxuu ahaa mid loogu tala galay kobcinta iyo kor u qaadka aqooneed ee xubnaha, iyagoo lala qabadsiinayay siday u fahmilahaayeen, uguna shaqayn lahaayeen himilada iyo mabaadida (JWXO), ayaa xubnuhu waxay duruustan u qaadanayeen si degan oo taxadar leh. Hogaanka oo si faahfaahsan u bixinayay casharadan, ayaa wuxuu xubnaha ku adkaynayay inay shuruucda jabhada ilaaliyaan taasoo uu ku tilmaamay inay tahay sida keliya ee lagu gaadhi karo ujeedada halganka. Hogaanku wuxuu wakhti dheer geliyayay kuna cel celiyay siday xubnuhu u fahmi lahaayeen maamulka, maaraynta iyo hogaaminta toosan kuwaas oo loo baahanyahay in labarto laguna dhaqmo.
Dhanka shirarka wuxuu Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada ee JWXO warbixin siiyay dadkii shirka ka soo qaybgalay. Warbixnta hogaanka ayaa waxaa ka mid ahaa dhibaatooyinka caalamka ka jira , isagoo si agaar ah uga hadlay heerka uu marayo halganka ONLF kula jirto gumaysiga Itobiya oo dil iyo cadaadis farabadan ku haya shacabka Ogadenya.
Hadafka iyo ujeedada hogaanku kulamadan u samaynayay ayaa waxaa ka mid ahaa;
1- Inuu bulshada Somaliyed uu ka dhaadhiciyo siday u taageeri lahaayeen halganka xaqa ah ee JWXO wado. 2- Inuu warbixin ka siiyo siyaasada Ethiopia ee ku wajahan guud ahaan umadda Somaliyeed.
Hogaanku Isagoo qodobadan kor ku xusan iyo kuwa kaleba ka hadlaya ayuu si qoto dheer uga soo xog-waramay taariikh halgameedkii dheeraa ee wali socda ee loo soo maray xoraynta dalka Ogadenia. Wuxuu hogaanka xogtaa kaga waramay meesha halganku maanta marayo oo uu ku tilmaamay mid aad iyo aad xoog u leh.
Hogaanku waxuu intaa raaciyay inuu qof walba oo Somaliya waajib ku tahay taageeridda iyo inuu hiil lagarab joogsado halganka ONLF. Hogaanku waxa kale oo uu odayaasha iyo aqoonyahankaba u sheegay in ayna ONLF marnnaba halganka ay wado joojinayn ilaa uu dalka Ogadenya ka xoroobayo.
Intaa waxaa dheerayd inuu hogaanku si qota dheer uga warbixiyo halganadii soo dhex maray Somalida iyo Itoobiya laga soo bilaabo halgankii Axmed gurey ilaa kan maanta ONLF ay kula jirto gumaystayaasha Itobiya.
Kadib kolkay warbixintaa waafiga ah heleen ee ku saabsan taariikhdii hore ee la soo dhaafay iyo halganka hada ah kadhex socda ONLF iyo gumaysiga Itobiya ayay odayaashii iyo indheer garadkii fursada u heley inay lakulmaan hogaamiyaha waxay soo dhoweeyeen wixii talo iyo tusaalooyin ahaa ee mudane Diirane goobahaa ka soo jeediyay. Ugu danbayntiina dhamaan shirarkaasi waxay ugu dhamaadeen guul iyo is afgarad dadkii ka soo qaybgalayna waxay garaysteen inay halganka ONLF taageeraan.